Umyalo umnotho osekunesikhathi e-USSR, kanye kwamanye amazwe e-Engxenyeni esempumalanga yeYurophu. The main lolwehlukanisa zalesi simiso isimo ubhekwa egunyeni leSonto uhulumeni kanye nethonya layo kuyo yonke imikhakha yomphakathi. Yiqiniso, ngokusemthethweni, yonke impahla owned by umphakathi, futhi yonke into ezandleni labantu.
State ngaphansi umnotho umyalo alwele ukufeza umphumela eyodwa, inqubomgomo-ukuhlela, futhi kwezinye izimo Kwathi despotism. Ezimweni ezinjalo, abanikazi amabhizinisi kanye nezinhlangano zaphucwa kungenzeka ukusebenza ngokuzimela, njengoba bathembele ngokuphelele phezu apharathasi zombuso control. Uma sikhuluma ubudlelwane emakethe, bese kukhona kwaneliswe isidingo is ayakhekanga ngaphansi kwethonya mncintiswano mahhala, kodwa ngesicelo futhi oda elibusayo. Lokhu akusona isimanga, ngoba iziphathimandla asimeme ehilelekile ukusatshalaliswa nokudayiswa umkhiqizo osuphelile.
Umyalo umnotho ihlelwe ngendlela yokuthi amandla esiphezulu bagxila ezandleni zikahulumeni. Futhi lokhu, esikhundleni salokho, kuzenza zibe zimbi nakakhulu kakhulu ubushiqela. Ukungabikhona kokuncintisana futhi ngokweqile emizimbeni ingcindezi kuhulumeni ebambezela ukuthuthukiswa embonini, okuholela ukwehla kwemikhiqizo lifakazelwa. monopolization Ingabe Ohulumeni Banalo Lonke kuchaza ukwehla yokuthengisa nokuntuleka kokudla. Kukhona ukungezwani ezikhulayo ngenxa yokungabi bikho Imininingwane okudla, izingubo zokugqoka nezinye izinto eziya ebalulekile.
Loluhlelo ukukhiqizwa iyawakha kusengaphambili ngqo zikahulumeni ogunyaziwe. UHulumeni babekholelwa ukuthi ithemba indlela uyinkimbinkimbi kuhlaziywa abaphathi ibhizinisi kokunganaki futhi okungalungile. Iphutha elikhulu kunawo wonke izidumbu yokwakha ehlelelwa ingabe isimiso sibalo zabo, njengoba ukukhiqizwa kulinganiselwa yayisekelwe omisiwe izidingo esincane sabantu. It kusikisela ukuthi umuntu ngeke uthathe mkhiqizo kuka idinga. Nakuba elinemininingwane kanye ne-accounting for izehlakalo kwakufanele abe, mhlawumbe, ukuthi bekungaba ngcono inhlalakahle izakhamuzi.
Administrative-umyalo umnotho, ukungasebenzi umsebenzi yemithombo yezindaba. Kulezi zikhathi samanje ukucwaninga esiqinile, okuyinto wasongela ukuziba hhayi kuphela umthwalo ejele, kodwa futhi ekuphileni daredevil liguqubele. Imiqondo nenkululeko yokukhuluma engazange abe khona, futhi ukuphrinta wanikezwa kuphela impahla evunywe ejensi zokulawula.
Umyalo umnotho - uhlelo has zombili emihle nemibi. Ububi le ndlela yokuphila ngokuyinhloko ukuntuleka intuthuko kwimikhakha ukukhiqizwa, okuyinto kunciphisa kakhulu izinkomba. Ngaphezu kwalokho, yinye kwamandla yinde inqubo kokwenza noma isiphi isinqumo ku ukulungisa uhlelo ukuthethwa kwecala. Kuze isicelo ifinyelela umzimba ophakeme ke umsebenzi lizobuyekeza futhi umyalelo esisemthethweni lapho kwemukelwa khona isiphakamiso noma ukwenqaba, kuzothatha isikhathi eside kakhulu.
Nokho, umnotho umyalo futhi kunezinzuzo abalulekile. Uhulumeni wakwazi ukufeza bawuhloniphe ngokuqinile washaya imithetho kwezigwegwe, ngoba wonke umuntu wayazi ukuthi kuyoba ngenxa infraction. Ngaphezu kwalokho, zonke izakhamuzi lizwe kungaba beqiniseka ikusasa yabo siqu. Ngokusho isiqubulo kwaleso sikhathi, umsebenzi ennobles indoda. Le ndoda isebenza iyohlale enikeziwe nokudla nendawo yokuhlala, futhi kwanqunywa ukuba kabusha izimuncagazi.
US ipasipoti: oda irisidi, usuku lokuphelelwa yisikhathi, isampula
Usuku Unicode sika - iholide professional yesimanje
Sibhedlela, Leningrad: ukubuyekezwa, impatho amathuba. I zokungcebeleka best of Leningrad esifundeni izingane kanye nabantu abadala